तपाईलाई स्वागत छ - एक हप्ता सोच्नुहोस्
के तपाईले आफ्नो जीवनको ’boutमा सोच्नुभयो ? वा तपाईले अब यो पछि के हुने हो भनेर उत्सुक भई मेनु बटनमा क्लिक गर्नुभयो ? तपाईले आफ्नो अस्तित्वको विषयमा केही जवाफ पाउनुभयो ? के तपाईलाई दिइएका बृहत् जानकारी बाट, जीवन कुनै संयोगले बनेको होइन भन्ने कुरा प्रभावित भयो?
अझै अरु केहि छ कि ?
जीवनको ’boutमा अझ“ै छ भने के त ? विज्ञानले पनि अझै“ बढी भन्दा बढी मात्रामा जीवन संयोगले बनेको होइन भनेर साबित गर्दैछ । ठुला वैज्ञानिकसँग पनि हाम्रो अस्तित्वको प्रश्नलाई लिएर कुनै उत्तर छैन ।
यो कुनै दुर्घटना होइन
यदी जीवनको सुरुवातको संभावना एउटा संयोगको सफल श्रृंखला हो भन्ने मान्यता शून्य बराबर साबित भएको छ भने, यी सबको पछाडी त्यहाँ कोही बुद्धिमान ब्यक्तित्व हुनुपर्छ । के बुद्धिमान ब्यक्तित्व जो पृथ्वी र सबै संसार बनाउनुहुने श्रृष्टिकर्ता नै हुनुहून्छ त ? के यो विचार तपाईको भन्दा फरक छ के यसले तपाईको विचारलाई हानी पु¥याउ“छ ?
यदि तपाई यी सम्भाव्यताको ’boutमा सोच्न इच्छुक हुनुहुन्छ भने, पढ्दै गर्नुहोस् …
बुद्धिमानी योजना यदि सबै जीवनको पछाडी एउटा योजना छ भने, त्यहाँ योजना बनाउने व्यक्ति पनि हुनुपर्छ । उहाँ कस्तो प्रकारको योजनाकार हुनुहुन्छ होला त ?
के तपाई यो देख्न सक्नुहुन्छ ? यसको ’boutमा सोच्न सायद गाह्रो होला ः निर्माताले हाम्रो वरिपरी भएका यी सबै थोकहरु अति नै विस्तारमा बना“उनुभयो, सबै कुरा एकअर्कासँग निर्भर गरेर जोडिएको छ । यद्यपि ठूला वैज्ञानिकहरुलाई पनि यी कुराहरु बुझ्न गाह्रो छ, किनकी उनीहरुको अध्ययनको क्षेत्र सीमित छ र सबै जान्न कठिन छ । योजनाकर्ता
कस्ता होलान् यी निर्माता ? के उहाँ सिद्ध र पवित्र हुनुहुन्छ ? यदि हुनुहुन्न भनेता, यी सबै सृष्टिहरु यति सिद्धताका साथ बनाउन सक्नुहुने थिएन होला । प्रकृति यस्तो सिद्ध तरीकाले बनेको छ, की हामी मानवहरु यत्तिका वैज्ञानिकहरुले यत्तिका बर्षहरु बित्दा पनि बुझ्न सकिरहेका छैनन । यो चाहि“ अचम्मै तरीकाको बुद्धिले बनेको हुनुपर्छ जसले यसको सृृष्टि ग¥यो ।
एक सिद्ध योजना के निर्माताले साच्चै नै सबै थोकहरु सिद्ध तरीकाले बनाउनुभएको छैन र ?
वरिपरी हेर्नहोस् …तपाई के देख्नुहुन्छ ?
के सबै थोकहरु सिद्ध छन् ?
शायद छैन होला । केही तरीकाले, सबै सिद्ध त छैनन्, तर प्राय जसो सबै थोकहरु प्रकृतिको नियम अनुसार नै चलिरहेका छन् ।
03 दिनसम्म जारी राख्नुहोस्